ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် ဆပ်လို့ရယ် ကုန်နိုင်ပါ့မလားကွယ် (U Win Tin) | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် ဆပ်လို့ရယ် ကုန်နိုင်ပါ့မလားကွယ် *
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂
ကျုပ်ဆိုတဲ့ ကျုပ်ကလည်း သေ….. မသေနိုင်ဘူးဗျာ။ ရှစ်ဆယ်ကျော်လှပြီ။ သေပါတော့လား ။ မသေသေးဘူးဗျ။ ဘယ်တန်ခိုးရှင်ကများ ညိုမာန်နဲ့ အပိုအလျှံ အိုဒဏ်ပေးလေတယ် မသိပါဘူးဗျာ။တကယ်ပါပဲ။ ၂၀၁၂ ကုန်ခါနီးပြန်ပြီ။ ကျူပ်ကမသေရေးချ မသေသေးဗျ ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေက ထောင်ကြိုခေတ် ထောင်ပြင်မှာလည်းငတ်ခဲ့ပြီဗျာ။ ထောင်တွင်းခေတ်မှာ ထောင်ထဲမှာလည်း ငတ်ခဲ့ပြီဗျာ။ အခု ထောင်လွတ်ခေတ် ထောင်ပြင်မှာလည်း ငတ်နေဆဲဗျာ။ ဗမာတစ်ခွင် မဟာသခင်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်းတွေကတော့ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ငွေဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေဗျ။
အခု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ တောင်းထားတာက လူပေါင်း ၄၀၀ ကျော်လောက်အတွက်ပါ။ ငွေကလည်း ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၇၀၀ လောက်ပါ။ ဒါလေးများ စကားထဲ ထည့်ပြောနေရဦး မှာလားဗျာ။ ဟဲ…….ဟဲ။
(ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် – ဒီလှိုင်းဂျာနယ်။ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄၆) မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်)
10 Responses to ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် ဆပ်လို့ရယ် ကုန်နိုင်ပါ့မလားကွယ် (U Win Tin)
အကီး on December 5, 2012 at 3:36 am
ဘဘကီးဦးဝင်းတင်ပြောတာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တီရုတ်တွေထဲမှာလည်း နှီမျိုးရှိတယ်၊ တီရုတ်ကောင်းတွေဆိုတာရှိခဲ့တယ်၊
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ တရုတ်သူဌေးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ချန်မာဖီ (Cham Ma Phee) တို့လင်ချင်းချောင်း (Lin Chin Tsong) တို့ ဆို ကျောင်းဆောင်တွေဆောက်ပြီးလှူခဲ့တယ် အဆုံအမသြ၀ါဒတွေကိုခံယူခဲ့
တယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဆူတို့ တတွေကြီးပွာချမ်းသာတဲ့ ဆူဌေးကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘဘကီးပြောတဲ့ တီရုတ်တွေ
ကတော့ တီရုတ်စုတ်တွေကီးဘဲ။ အဲဒီ့ တီရုတ်စုတ်တွေနဲ့ဗိုလ်ကီးစုတ်တွေပေါင်းစားတော့ ဘိမာအပုတ်ကီး ပေါ်လာတာ
Max zaw zaw on December 5, 2012 at 8:31 am
He right get out china
Moe Moe Hnin on December 5, 2012 at 4:21 am
We owe so many thanks to you for that kind of energized article.You are our guiding star , you see through every little truth and tell us and teach us the right and the wrong.You may live long and shine forever in our hearts and minds.
Respectfully yours MMHnin.
U Aye on December 5, 2012 at 8:32 am
Yes. Please give more messages to people while you are healthy. Hope long, healthy life.
U Thi Ha Tint Swe on December 5, 2012 at 5:08 am
You can know China’s communist colony on Burma’s land of Gas-pipe line ,Rakhine to ,Unan and other China’s companies !
min thein kyaw on December 5, 2012 at 9:12 am
ဘဘဦးဝင်းတင် အသက် ရာကျော်ရှည်ပြီး၊တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ အမှန်တရားကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါဘဘ။
တရုတ်ကြီးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကျေးဇူးရှင်နံပါတ် တစ်၊ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်နံပါတ် တစ်။
myo thant zaw on December 5, 2012 at 10:32 am
Bloodly right! we are still under the facsist regime with fake democracy/fake constitution/fake parliament.Same like the Japanese era.We need ABSOLUTE CHANGE for our future generation! Notafake one!
aye mintun on December 5, 2012 at 4:50 pm
mgoogyaw on December 5, 2012 at 5:06 pm
I have totally agree and understand,and also support to your Article,Uncle U Win Tin. I have respect you for your philosophy of Burma,that we have suffered and not ended yet,that gives by Military Rich men Generals and their cronies.
demopower fordemocracy on December 6, 2012 at 12:52 am
I want to see war cremial to than shwe and than shwe dogs be sue by NATO and UN.(case of chemical weapons and human right abuse) after that every body will see real domo power of democracy (not armycracy = not thein sein & military)..thein sein come from military and not from demo…..look like nay win socialist 26 years…thank shwe contro to thein sein heart machine…